WARBIXIN: Zinedine Zidane Vs Luis Enrique vs Diego Simeone- Min Imisa Dhibcood Ayay Horyaalka La Ligaha Ka Soo Heleen Tan Iyo Markii Zidane Loo Magacaabay Shaqada Los Blancos?. - Laacib.net
WARBIXIN: Zinedine Zidane Vs Luis Enrique vs Diego Simeone- Min Imisa Dhibcood Ayay Horyaalka La Ligaha Ka Soo Heleen Tan Iyo Markii Zidane Loo Magacaabay Shaqada Los Blancos?.
Habeen danbe waxaa si rasmi ah loo ogaan doonaa kooxda noqon doonta Championska horyaalka Spain laakiin haddaba ugu dhawaan waxaa ah Real Madrid oo kaliya hal dhibic uga baahan kulanka Malaga ee xili ciyaareedkan ugu danbeeya waxayna Los Blancos gacanteeda ku jira suurtogalnimada ay koobkan ugu guulaysan karto basle Barcelona ayaa doonaysa in ay ilaa daqiiqada ugu danbaysa u tartanto koobka ay difaacanayso.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qaabkii layaabka laaha ee uu Zinedine Zidane kooxdiisa Real Madrid kaga dhigay mid qarka u saaran in ay ku guulaysato koobkeedii La Ligaha ee ugu horeeyay shantii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay tan iyo markii uu Rafael Benitez ka badalay shaqada Madrid bishii January ee sanadkii hore.
Xili ciyaareedkii la soo dhaafay Real Madrid ayaa hal dhibic oo kaliya ku wayday koobka La Ligaha kadib markii ay cadaadis wayn saartay Barcelona oo u muuqaday in ay koobka luminaysay bilhii ugu danbeeyay iyada oo 9 dhibcood oo ay Real Madrid ka saraysay ay hal dhibic oo kaliyi ka badbaadisay.
Haddaba min imisa dhibcood ayay Zidane, Enrique iyo Simeone horyaalka La Ligaha ka soo heleen tan iyo kulankii ugu horeeyay ee uu macalinka ree France shaqadiisa ka bilaabay Real Madrid?. Jawaabta su’aashani waxay cadayn buuxda u tahay sida uu Zidane u badalay Real Madrid isla markaana uu uga dhigay koox ka soo kabsanaysa abaartii koob la’aanta La Ligaha ee soo haysatay tan iyo markii uu Mourinho koobkan u qaaday sanadkii 2012 kii.
Zidane ayaa Real Madrid u horseeday in ay soo heshay 143 dhibcood oo horyaalka La ligaha ah tan iyo markii uu shaqadan la wareegay waxayna haddii ay wada guulaysan lahayd heli kartay 171, wuxuuna afar dhibcood ka sareeyaa Luis Enrique oo isna Barcelona tan iyo waqtigaas ku soo hogaamiyay 139 dhibcood oo ay ka heleen 171 dhibcood oo la heli karayay.
Laakiin Zidane ayaa Diego Simeone iyo kooxdiisa Ateltico Madrid ka sareeya 21 dhibcood. Xili ciyaareedkan waxay Real Madrid guuldaro kala kualntay kulamada La Ligaha saddex kooxood oo kaliya waxayna kala yihiin Barcelona, Sevilla iyo Valencia.
In Zinedine Zidane uu qaab ciyaareedkii La Ligaha ee kooxdiisa Real Madrid uu sidan uga dhigay mid joogto ah ayaa ka caawinaysa in Zizou uu markii ugu horaysay ku guulaysato horyaalka Spain isaga oo macalin u ah kooxdii qalbigiisa soo gashay isaga oo ciyaartoy ah ee Los Blancos wuxuuna qarka u saaran yahay in koobka La Ligaha la keeno Estadio Santiago Bernabeu markii ugu horaysay tan iyo sanadkii 2012 oo uu Mourinho koobkan ku qaaday 100 dhibcood.